Angelina Jolie oo sheegtay in habkii qaxootiga caalamka uu burburay.. - iftineducation.com
Angelina Jolie oo sheegtay in habkii qaxootiga caalamka uu burburay..
iftineducation.com – Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga, Angelina Jolie, ayaa waxay sheegtay habkii qaxootiga caalamka uu burburay, xilli ay la hadleysay BBC.
Waxay sheegtay dagaalada xilligan ka soconaaya qaybo ka mid ah caalamka, ay sababeen tiro aan horay loo arag oo muhaajiriin ah, iyadoona sheegtay cabsida laga qabo muhaajiriinta ee ah inaanan la xakamayn karin, ay burburisay kalsoonidii dadku ku qabeen dowladaha iyo hay’adaha caalamiga ah, s ay wax uga qabtaan.
“Dhinac marka laga eeggo muhaajiriinta tirada badan ee ku soo qul qulaaya Qaaradda Yurub, waxay sababtay inay dadku gacan u fidiyaan oo deeqsinimo ay muujiyaan. Dhinaca kalana waxay keentay dad fara-badan oo reer Yurub ah oo shaki wayn ka qaba dadkan faraha badan ee ku soo qul qulaaya, isla-markaana aan la xakamayn karin.” Ayay tiri Angelina Jolie.
Sidoo kale waxay sheegtay in ka badan lixdan milyan oo qof inay ku barakaceen 122 dal, marka loo eeggo dunida oo idil, waxayna tilmaamtay in tiradaasi ay tahay mid aad u badan.
Waxay sheegtay tirada lixdanka milyan ee barakacday ay tahay tiradii ugu badneyd ee sidaasi u barakacdo, muddo toddobaatan sano ah.
Angelina Jolie oo ah haweeney si wayn loogu yaqaano aflaamta Hollywood-ka Mareykanka, ayaa waxay walaac ka muujisay burburka ku yimid habkii qaxootiga caalamka.
Donald Trump oo sheegay inaanu xiriir wanaagsan la yeelan doonin David Cameron..